शीर्ष Bas बास्केटबल टोली अभ्यास गर्मीको समयमा प्रयास गर्न - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अप्रिल 16, 2021 अप्रिल 13, 2021 स्टेफनी स्नाइडर ब्लग, सम्पादकको पिक, खेल
गर्मी समय आउटडोर खेलकुद अभ्यास गर्न सही समय हो।
स्कूलबाट ग्रीष्मकालीन विश्राम पाउँदा स्कल उमेरका बच्चाहरूलाई खेल अभ्यास गर्न मौका दिन्छ।
एक कुशल र अनुभवी प्रशिक्षक भएकोले सबै भन्दा राम्रो टीम परिणाम दिन्छ।
आकारमा जानको लागि र धैर्यता निर्माण गर्नमा रुचि एक चीज हो जुन एथलीटहरूले वर्षभरको सोच्दछन्। जे होस् अफ-सीजन एक हप्ता वा अभ्यासमुक्त हुन सक्दछ, एथलीटहरू आकारमा रहन्छन्, स्ट्यामिना र सहनशीलता बनाउँदछन्, र उनीहरूको खेललाई सबै वर्ष पूर्ण गर्दछन्। बास्केटबल खेलाडीहरूको लागि, यसको अर्थ ग्रीष्म comprehensiveतुमा व्यापक प्रशिक्षण र अभ्यास हो।
बास्केटबल डाउनफील्डमा फाल्नुको अलावा, ड्रिबलि the बललाई सार्ने तरिका हो।
धेरै व्यायामहरू अफ मौसममा प्रशिक्षणको लागि उत्कृष्ट छन्। त्यसैले गर्मी लीगहरू र पिक-अप बास्केटबल खेलहरू छन्। जहाँसम्म, बास्केटबल टीमहरू विकास र सुधार गर्नका लागि, त्यहाँ पाँच चीजहरू हुन् जुन उनीहरू गर्मी को समयमा प्रयास गर्नुपर्दछ।
१. हात-आँखा-समन्वय अभ्यास गर्नुहोस्
हात-आँखा समन्वय सुधार तपाईं बास्केटबल कोर्ट मा के गर्न सक्नुहुन्छ को वृद्धि हुनेछ। यसले खेलाडीहरुलाई समात्न, पास गर्न, र प्रहार गरिएको बेला गोली हान्न बल गर्दछ। यो त्यस्तो चीज हो जुन अभ्यास गरेर तपाईंले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। केहि अभ्यास र गतिविधिहरूले हातले नेत्र समन्वय निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
टेनिस बलको साथ बल ड्रपले हातको आँखाको समन्वय र प्रतिक्रिया समय सुधार गर्दछ। टेनिस बललाई भुइँमा फाल्नुहोस्, एक पटक उछाल हुन दिनुहोस्, र दोस्रो पटक उछाल हुनु अघि यसलाई समात्नुहोस्।
तीन वा चार टेनिस बलहरू जगमा पार्नु अर्को ठूलो क्रियाकलाप हो। यदि चार बल जबरजस्ती छन्, दुई संग शुरू र थप।
सानो आकारको बलहरू हातको नेत्र समन्वय सुधार गर्न एक उत्तम तरिका हो। यो बल संग राख्न तपाईं बल गर्दछ।
२. कन्डिसन क्याम्पहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्
स्कूलहरूमा एथलेटिक कार्यक्रमहरूको लागि समयरेखा र नियमहरू भएको कारण धेरैले गर्मीमा छोटो मिनी कन्डिसन शिविरहरूको छनौट गर्छन्। खेलाडीहरूको विकासमा समर्पित कोचहरूले यी कार्यक्रमहरू सफल बनाउनका लागि समय र प्राय: स्रोत समर्पण गर्छन्। यसमा गुण प्रदान गर्नु पनि समावेश छ कस्टम बास्केटबल जर्सी वा खेलाडीहरूको लागि शर्ट शटिंग। यी शिविरहरू सीप, नेतृत्व र सहनशीलताका लागि उत्कृष्ट उपकरणहरू हुन्, र खेलाडीहरूले राम्रो खेलाडीहरू छोड्छन्।
Passing. पास गर्ने प्रविधिहरूको अभ्यास गर्नुहोस्
पासिंग बास्केटबल र सबैभन्दा बढी उपेक्षित कौशलको एक आधारभूत हिस्सा हो। पासिंगको एक विशाल हिस्साले विपक्षी टीममा तपाईंको चाललाई टेलिग्राफ नगरी गर्न सक्दछ। पासिंग भनेको जब खेलमा धेरै टर्नओभर हुन्छ; त्यसकारण, ध्यान केन्द्रित र भ्रामक रहन सिक्नु आवश्यक छ।
पासिंग सजिलो लाग्न सक्छ, तर बल चलाउँदा चलान सजिलो छैन, र तपाईंको टोली साथी पनि चल्दै छ। टिममेटको बिच धेरै अभ्यास बिना, परिणाम या त बल तपाइँको टीममेट छ अघि वा पछाडि राख्नु हो।
राम्रो पासिंग आवश्यक छ किनकि:
पासिंग भनेको के हो बास्केटबललाई एक टीम खेल। बिना पासिंग, यो एक व्यक्तिगत खेल हुनेछ।
उत्तीर्ण बिन्दुमा जान्छ। खुला खेलाडीमा बल पास गर्ने खेलाडी खेल जित्न सब भन्दा सजिलो तरीका हो।
पासिंगले बास्केटबलको आपत्तिजनक पक्षलाई अझ बढी पहुँचयोग्य बनाउँदछ बल वरिपरि घुमाएर र डिफेन्स सार्नको लागि।
ठूलो पासिंग भनेको खेल्ने बलसँग व्यस्त हुनको लागि अधिक समय हो, र यसले तपाईंलाई भुइँमा राख्नेछ, यदि तपाईं उत्तम स्कोरर हुनुहुन्न भने पनि।
बास्केटबल खेलाडीहरूले फिल्म अध्ययन गर्न समय लिनु पर्छ।
Rib. अभ्यास ड्रिब्लिling
बास्केटबल डाउनफील्डमा फाल्नुको अलावा, ड्रिबलि the बललाई सार्ने तरिका हो। ड्रिलिंगले तपाईंको हातहरू औंलाहरू फैलाएर र तपाईंको पामलाई बास्केटबलमा पर्याप्त दबाबको लागि प्रयोग गर्दछ जुन यसले भुइँमा हिर्काउँछ र तपाईंको हातमा फिर्ता आउँछ। यो सरल देखिन्छ तर dribbling जबकि चाल र ताल र दक्षता लाग्छ। यो भुक्तानी को अपराध र बचाव को लागी आवश्यक छ।
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन खेलाडीहरूले मौलिक कौशल dribbling अभ्यास किनभने धेरै दण्ड र उल्लंघन dribbling संग जोडिएको छ। एक रोक्ने ड्राईबल तब हुन्छ जब एक खेलाडी ड्रबिंग गर्दैछ, रोकिन्छ, र त्यसपछि फेरि ड्राइबिंग सुरु गर्दछ। अर्को यो हो जब एक खेलाडीले आफ्नो ड्रइब्लि action्ग कार्य रोक्दछन्, यदि एक सेकेन्डको लागि मात्र, आफ्नो नाडीलाई घुमाएर। त्यो cupping हो, र दुबै उल्लंघनको परिणाम अर्को टीममा जाने बलमा हुन्छ।
Watch. टेपहरू हेर्नुहोस्
बास्केटबल खेलाडीहरूले फिल्म अध्ययन गर्न समय लिनु पर्छ। यसमा सीजनबाट आफैंका फिल्महरू, विरोधी टोलीका फिल्महरू, वा सीपहरू वा आधारभूत कुराहरू सिकाउने फिल्महरू समावेश हुन सक्छन्। चलचित्र हेरेर कोचहरूलाई अभ्यास सत्रहरूमा अधिक लोड न गर्दै उनीहरूले के गर्छ भनेर देखाउन सजिलो हुन्छ।
एक बास्केटबल टीम पनिसँग एक उत्तम मौसम थियो विकसित, बढ्न, र अझ राम्रो हुन सक्छ। गर्मी मा टीम टोली अभ्यास पनि समावेश छ। बास्केटबल टोलीले गर्मीमा देख्न सक्ने शीर्ष try चीजहरू हात-आँखाको समन्वय अभ्यास, ड्रबिंग अभ्यास, पासिंग अभ्यास, कन्डिसन क्याम्प प्रस्ताव गर्दै, र टेपहरू हेरिरहेका छन्। यी सुझावहरूले टीमलाई सुधार गर्दछ।
बास्केटबल कोच कोचिंग सांप्रदायिक समाचार